iTunes 11.1 dia tsy mamela ny fametrahana Custom Firmwares | Vaovao IPhone
Isaky ny misy ny kinova vaovao an'ny iTunes miresaka isika jailbreak ary ny azy compatibilidad, ohatra, tamin'ny fampisehoana ny iTunes 11 dia nanao lahatsoratra manokana izahay hanazavana izany iTunes 11 dia tsy mampiseho olana amin'ny jailbreak, ny lahatsoratra dia saika mitovy foana, fa iTonony 11.1 Tsy hitovy io, eny manana olana amin'ny jailbreak.
iH8sn0w nanazava tao amin'ny twitter fa ny kinova iTunes vaovao dia tsy mamela ny hametraka firmware mahazatra ary noho izany dia very ny safidinao amin'ny fampiasana firmware amin'ny SHSH anao manokana tahaka ireo noforonin'ny programa iFaith ho an'ny iPhone 4 sy teo aloha.
Alohan'ny nidiranao fotsiny ny SHSH tao anaty firmware ary rehefa nanamarina i iTunes (mifandray amin'ny mpizara TSS an'i Apple) dia nanaiky azy ireo ho marina izy ireo, izany hoe nahazo ianao mamitaka iTunes amin'ny fanamarinana farany nataonao mba hisorohana anao tsy afaka mametraka rindrambaiko taloha.
Araka ny fantatry ny ankamaroanao Apple dia manamarina an-tserasera fa ny baseband anao no farany mamela anao hanavao, koa nmila manao sonia ny rindrambaiko an-tserasera amin'ny mpizara anao ianao, ary iTunes dia mety ho voafitaka amin'ny alàlan'ny fampidirana baseband farany farany ary milaza azy hitady ireo SHSHs hanao sonia amin'ny mpizara Cydia fa tsy ny mpizara Apple, fa Tapitra ity...
Ao amin'ity kinova vaovao ity Apple dia mifandray amin'ny mpizara azy ary mamerina manisa ampahany amin'ny img3 tsirairay raha tokony hampiasa ireo izay efa tafiditra ao amin'ny BuildManifes.plist an'ny firmware mihitsy, miaraka amin'izany ho hitany fa tsy orizinaly ireo firmware manokana ary tsy hamela anao hametraka azy ireo. Olana iray.
Ny vahaolana tokana dia mety mamorona fitaovana vaovao mamela anao hametraka firmware mahazatra, satria amin'ny alàlan'ny iTunes dia tsy ho azo atao izany manomboka izao. Ny hoavin'ny firmwares manokana dia maizina tokoa, ary koa ny hoavin'ny fidinana an-tsokosoko izay nikatonan'ny Apple efa ela lasa izay niaraka tamin'ny fanamarinana vaovao.
Fanazavana fanampiny - iTunes 11 dia tsy mampiseho olana amin'ny jailbreak
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » iTunes 11.1 dia tsy mamela ny fametrahana Custom Firmwares
Amin'ny redsnow dia azonao atao ny mihena tsy mampiasa iTunes, sa tsy izany?
MrM dia hoy izy:
Izaho dia nanao jailbreaks hatramin'ny IOS 5, tsy ho an'ny telefaoniko ihany, fa koa ho an'ny namana na mpianakavy izay tena nanararaotra izany ary tsy mila mampiasa firaketana manokana aho. Indraindray miaraka amin'ireo telefaona izay tsy ahy (mbola tsy nataoko mihitsy), dia notehiriziko tao amin'ny TinyUmbrella ny SHSH natokana ho azy ireo, raha toa ka napetrany teo amin'ny toerana tsy tokony izy ireo ny rantsantanany. Ny fanaovana zavatra am-pitandremana dia safidy izay tsy hampiasainao mihitsy.
Valiny amin'i MrM
Alejandro Castellanos dia hoy izy:
Amin'ny redsn0w dia vita tsy misy olana. noraisina ho mpikambana
Valiny tamin'i Alejandro Castellanos
Hafahafa izany! Satria nampakatra sy nisintona ny Apple TV2 araka izay sitrako aho, miaraka amina firmware firmware 5.2 SP, ary mampiasa redsn0w ho an'ny dfu mode, iTunes 11.1. Tsy misy olana na lesoka.
Kizar dia hoy izy:
Iza no nanoratra an'io? Azafady, mitandrema amin'ny fanoratana anao, ny lahatsoratra toa an'io dia very be.
Valiny tamin'i Kizar
gdball dia hoy izy:
Vao nanao izany tamin'ny redsn0w aho ary tsy nisy olana, sintomy ny iOS ary marina ny zava-drehetra.
Valiny amin'ny gdball
CQ iQ dia hoy izy:
Voakasik'izany fanelingelenana izany aho.
Raha ny fahitana azy dia misy fiantraikany amin'ny iphone 4 fotsiny io, misy fitaovana hafa mamela ny fadin-tseranana tsy misy olana.
Ao amin'ny iPhone 4, raha manandrana mametraka fomba amam-panao ianao dia hamerina ny lesoka 11 ny iTunes, ary koa raha sendra manavao ny iPhone 4 izay manana jailbreak ianao (ahem: 6.1.2) mankany ios7, rehefa manomboka ny famerenana amin'ny laoniny dia hiverina ny fahadisoana 6 ary hanana mihoatra ny famerenana amin'ny laoniny azy amin'ny alàlan'ny DFU ianao.
Ary ho an'ireo izay mino fa hamaha ny olana ny fampiasana redsn0w dia manenina aho milaza fa tsy izany no izy. Raha manandrana mamerina amin'ny laoniny ianao dia tsy hahomby ny famerenana amin'ny laoniny rehefa manandrana mampakatra ny iBEC, ary i redsn0w dia hampitandrina fa tsy hahita ilay iphone amin'ny fomba fanarenana. Raha, etsy ankilany, ny famerenana amin'ny laoniny dia ezahina atao IPWS tany am-boalohany amin'ny fanamarinana ny safidy tsy hanavaozana ny baseband. Aorian'ny fanoratan'i redsn0w ny iBEC, hahazo hafatra izahay fa ny APTikect dia tsy mifanaraka amin'ny iphone. Tsy nanandrana fanavaozana debaseband aho noho ny antony fantatsika rehetra.
Amin'izao fotoana izao ny vahaolana tokana ananako dia ny fampiasana kinova taloha kokoa amin'ny iTunes amin'ny solosaina hafa.
Valiny amin'ny Cerial iQ
fa ahoana no hatao amin'ny redsn0w? Ny redsn0w dia manamboatra ny fanao ary mampiditra dfu fa avy eo dia mila mampiasa iTunes ianao mba hametrahana ilay fanao. tsy toy izany
Manana olana aho rehefa miditra amina orinasa manokana…. Manana ny sarin'ny ios 6.1.2 sy 6.1.3 voatahiry amin'ny humbrela kely aho ary rehefa mamorona ny orinasam-pizaharana aho dia mandeha tsara, ny fotoana fametrahana azy amin'ny iTunes dia tsy azo atao ... Niezaka ny iTunes 10.7 11.0 11.0.4 aho ary ny mitovy amiko ny hafatra «Tsy nety tafaverina ny iPhone satria tsy mifanaraka ilay kinova nangatahina. Mety ho vitany ve ny tsy afaka nametraka orinasa manokana niaraka tamin'ny iTunes na inona na inona ilay kinova? Fantatrao ve ny kinovan'ny iTunes nidina ambany? Izaho dia ao amin'ny iOS 7 miaraka amin'ny iphone 4, ny marina dia tiako esorina satria nisy fiantraikany be tamin'ny zava-bitako izany ary heveriko fa tsy tokony nataon'izy ireo hifanaraka amin'ny iOS 4 izy ireo
Alam Becerril dia hoy izy:
Izaho dia iray amin'ireo voakasik'izany!… Nahita IPHONE 5 aho ary novonoin'i ICLOUD, TE HAMPIDIM-BOLA AMIN'NY IOS 6.1.3 NA 6.0.4 FA NY DAMN ITUNES TSY HAMELA ahy ary tsy handao ahy… iReb, Redsn0w ary tsy misy ilàna azy ireo rindranasa rehetra ireo satria tsy manana ny fanohanany ny iPhone 5… TSY AZO ATAO IZAO! Efa namaky azy io nandritra ny andro maro aho ary tsy misy azoko atao hidina amin'ny 6.1.3 na 6.0.4…. Raha misy olona mahalala programa misy dia mba lazao aho, arahaba.
Valiny tamin'i Alam Becerril
Eny Alam, ozona iTunes tsia !!!! Raha ianao no very ny iPhone 5 ary namaky ny hevitrao momba ny zavatra mety ho tsapanao, misaotra an'i Apple dia tsy ho afaka hanao na inona na inona amin'izay tsy anao ianao, arahaba
Ahoana raha 4s ny iPhone-ko, ary voan'ny Jailbreak izany, ary tsy vitako ny mamerina azy io tsotra izao, misy ve ny vahaolana?
Hivarotra iPhone, iPad na iPod Touch amin'ny iOS 7 ve ianao? Esory aloha ny hidim-pahavitrihana aloha